Malaza an-Tserasera Ny Mifohaza Meksika! Manohitra Ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2012 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, Français, Aymara, русский, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Nanaika ny mpanakanto, mpamorona, ary haino aman-jery hanambatra ny heriny ny fisian'ny herisetra sy ny tsimatimanota nandritra ny taona vitsivitsy ka hanao fanentanana hanova ny antontan'isa ho anaran'olona sy tantara. Amin'ny alalan'ny tetikasa ifarimbonana no itadiavany avy amin'ny mpijery azy ireo olona efa niharan'ny herisetra hafa ka hanome feo ireo niharan'ny herisetra ireo.
Nanantosa lahatsary marobe mitantara ireo olona novonoina tao Meksika ny mpanakanto. Ohatra amin'izany, ilay mpihira Ely Guerra nanatontosa lahatsary ary naka ny toeran'i Marisela Escobedo, renim-pianakaviana mitady ny rariny momba ny nahafatesan'ny zanany vavy. Na dia niaiky aza ny vadin'ity zanany vavy ity fa izy no namono ny vadiny, nanambara kosa ny manam-pahefana fa tsy ampy ny porofo manamarina izany.
Niady mafy ramatoa hisian'ny raharaham-pitsarana fanindroany saingy mbola afaka madiodio ihany ranamana. Nisy namono nahafaty teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana i Marisela Escobedo, raha nanao fihetsiketsehana sy nitolona ho amin'ny rariny momba ny zanany vavy. Tsy voasazy noho izany na izay namono an'i Marisela na ny namono ny zanany vavy.
Afaka jerena ato amin'ny lahatsary fanadihadiana ny tantara feno amin'ny teny anglisy :
Tranokala Proyecto Ambulante mamariparitra ny lahatsary manaraka:
Leonardo Amador Rivas, niasa tamina toeram-padihizana News Divine, izay toerana namoizany ny ainy tamin'ny 20 Jiona 2008 niaraka tamin'ny tanora tovolahy namany 11. Nirotsaka tao an-toerana hanao ny asany ny polisy, raha tsy nisy akory ny fandrindrana, dia nanao tsirambina ny asany izy ireo ka tonga dia miampanga tsotra izao ireo zatovolahy ireo ka nandatsaka ny ain'izy ireo.
Piro Pendas (Ritmo Peligroso), mpitendry mozika Meksikana, naneho hevitra momba ny tantaran'i Leonardo, izay tantaran'ny firenentsika [meksikana].
Dimy ambinifolo taona i Victoria Castro, avy ao El Salvador izy, iray tamin'ireo 72 nifindram-ponenana naripaka tao Meksika raha niezaka ho any Etazonia. Nitantara ny nahazo azy amin'ny alalany i Diana García, mpilalao sarimihetsika Meksikana.
Nisy ny antso natao tamin'ireo mpiserasera lahatsary tamin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera Facebook, antenaina fa samy hanokana fotoana hitadiavana olona niharan'ny herisetra ny mpiserasera tsirairay ka hitantara ny fiainany sy ny nanjo azy ireo. Ny lahatsary rehetra dia mifarana amin'ny fanehoan-kevitra fa ny gaboraraka sy ny kolikoly manjaka ao amin'ny firenena Meksikana no mahatonga ny famonoan'olona ka manentana mafy ny firenena izy ireo hitraka sy hifoha. Tsy misy fotoana farany ny famoahana ny lahatsary, satria mbola eo an-dalam-panatanterahana ny tetikasa.
http://youtu.be/6-mGO-Tn480 [/ embed]
<blockquote>Los invitamos a participar en un video colectivo que pretende darle voz y vida a los que la perdieron en manos de la guerra contra el narco, de la impunidad y corrupción, en manos de la violencia que se vive actualmente en nuestro país. Los nombres se cambian por números y esto nos hace ajenos a la tragedia. Cada víctima tiene nombre y detrás de él existe una vida, una historia, una familia. La tragedia es nuestra, no de alguien más.</blockquote>
<div class="translation">Manasa anao izahay handray anjara amin'ny lahatsary iombonana mba hanome aina sy feo ireo lavo teo am-piadiana ny raharahan-java-mahadomelina, ny tsimatimanota ary ny kolikoly, lavo tao anatin'ny herisetra izay lasa andavanandrom-piainantsika ato amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Niova ho tarehimarika ny anarana ary lasa manalavitra antsika amin'ny voina izany. Samy manana ny anarany avy ireo niharam-boina ireo, aorian'izany anarana izany misy fiainana, misy tantara, misy fianakaviana. Antsika io voina io fa tsy any an'olonkafa.</div>
<a href="http://youtu.be/u2OHlfMsxNA">Carlo Avilés nanome fitenenana an'i Juan Carlos Medrano</a>, izay nisy namono nandritra ny fankalazana ny fandresen'ny ekipany mpilalao baskety, vondron'olona mitam-piadiana no niditra tao an-trano nankalazana ny fandresena ka nitifitra azy ireo. Nitondra azy avy hatrany tany amin'ny hopitaly ny namana akaiky azyindrindra, saingy sarotra ny fitsaboana azy ary tsy tana intsony ny ainy 48 ora taty aoriana. Tanora efatra ambinifolo hafa ihany koa no namoy ny ainy ary 20 hafa kosa naratra. Eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 taona eo ho eo avokoa izy rehetra.
<p style="text-align: center;">http://youtu.be/u2OHlfMsxNA
Gazetiboky an-tserasera Marvin [es] mamahavaha ny tetikasa:
Nampiasaina ny YouTube sy ny tambajotran-tserasera mba hamoronana tranga mpiseho matetika, “Ny fianantsika, Ny anarantsika” antenaina hitondra fahatsiarovan-tena miaraka manoloana ny voina iainana isan'andro eto amin'ny firenena. Tsy zava-miseho hitantsika amin'ny haino aman-jery ihany ny herisetra, manomboka eny an-tokantrano ny herisetra ka eny ny toerana tokony hanombohantsika ny fanentanana amin'ny fametrahana kolontsaina tsy misy herisetra.
Hajian-tsary sy sary indray mipika mampiseho sarinà bala, avy amin'ny mpisera Flickr elbragon (CC BY 2.0).